Puntland oo ku adkeysaneysa in la baaro qaraxii lagu eedeeyay Qadar
Puntland oo ku adkeysaneysa in la baaro qaraxii lagu eedeeyay Qatar
Wargeyska reer Mareykan ee NYT ayaa daabacay in Dooxa ay "ku lug-lahayd" falkaasi, wallow ay dhinaceeda iska fogeysay.
GAROWE, Puntland – Dowladda Puntland ayaa ku adkeysaneysa mowqifkeeda ku aadan in la baaro qaraxii bishii May ka dhacay magaaladda dekadda leh ee Boosaaso kaasoo lagu eedeeyay dowladda Qatar.
Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed, lataliyaha sarre ee dhanka ammaanka madaxweynaha Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni ayaa shaaciyay in uusan wax isbedel ku imaan mowqifka xukuumadda ee baaritaanka weerarka argagaxiso.
Wargeyska New York Times oo baahisay sheekada ku aadan in Qatar ay kaalin ku lahayd qaraxa ay ku dhaawacmeen tobban ruux ayaa xusay in ujeedku ahaa in meesha looga saaro Imaaraadka, oo dhincyo kala duwan ka taageera Puntland.
"Arrinta ay Jariiradu ka qortay Qatar iyo ku lug-lahaanshiyaheeda qaraxii Boosaaso ka dhacay, qodobkaasi dowladda Puntland mowqif bey ka qaadatay, madaxweynuhuna waa ka hadlay, markii ugu horeysay oo ay jariiradu shaacisay maqaalkeeda," ayuu yiri Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed, xilli uu ka qeybgalayay Barnaamijka Faaqidaada VOA, laanteeda Afka Soomaaliga.
Isagoo sharaxaya mowqifka dowladda Puntland, La-taliyaha ayaa yiri: "Waxay Puntland ka qaadatay mowqif, waxayna ka dalbaneyso dowladda Soomaaliya in arrinkaasi ay si degdeg ah baaris ugu sameeyso".
Wargeyska New York Times ayaa sheegay in uu hayo cod laga duubay safiirka Qatar u fadhiya Muqdisho, kaasi oo ganacsade dalkaasi u dhashay "u sheegaya in ay iyagu ka dambeeyeen qaraxii Boosaaso".
"Wargeysku lama dhayal-san karo, New York Times, waa jariirad ballaaran, waxyaabaha ay ka shan-qarisay, tuhun bey iyaddu koley muujisay, oo waxay tiri arrin caddeyneysa waan haynaa, annagu ka dowlad ahaan, mowqifkeena illaa iyo hadda ma aha Qatar baa ka dambeysay ama dowlad kalaa ka dambeysay, laakiin maadaama warkaasu soo baxay soona shaac-baxay, waxaan ku dhawaaqnay, oo cod-saneynaa in baaris degdeg ah lagu sameeyo, welina mowqifkaasi ayaan taaganahay," ayuu lataliyaha sare ee amniga Madaxweyne Deni ku daray hadalkiisa.
Xukuumadda Dooxa ayaa iska fogeysay eedeymaha loo jeediyay iyadda oo dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay "in ay ku qanacday" beeninta iyo sharaxaada Qatar.
Warbixinta NYT ayaa timid iyadda oo mudooyinkii dambe ay magaala madaxda dalka, Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee qaar ay kusoo kordhayeen weerarada qaraxyadda, kuwaas oo galaaftay nolosha dad badan.
Madaxweyne Saciid Deni oo magacaabay Agaasimeyaal Guud
Puntland 22.10.2019. 06:39
Madaxtooyadda dowladda Puntland ayaa ku dhawaaqday magacaabista mas'uuliyiinta cusub.
Soomaaliya oo "ku qanacday" bayaanka Qadar ee warbixintii NYT
Soomaliya 23.07.2019. 20:21
Deni oo amray in la asteeyo goobta laga dhisayo dekad kalluumeysi
Puntland 26.09.2019. 19:30
Puntland oo dalbatay in la baaro warbixintii New York Times
Puntland 23.07.2019. 15:38
Puntland oo diyaar u ah in ay u kala dabqaado Jubaland iyo DF
Puntland 17.10.2019. 21:00